musha EUROPEAN FOOTBALL STORies Spanish Vatambi Vatambi Juan Mata Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts
LB inopa Nyaya Yese yeBhola Genius inonyatsozivikanwa neNickname; 'mhondi'. Our Juan Mata Childhood Story pamwe nes Untold Biography Facts inounza iwe nhoroondo yakazara yezviitiko zvinoshamisa kubvira paudiki hwake kusvikira zuva. Kuongorora kunosanganisira nhau yehupenyu hwake musati mazivikanwa, hupenyu hwemhuri uye dzakawanda OFF uye ON-Pitch zvishoma zvakazivikanwa pamusoro pake.
Hongu, munhu wose anoziva nezvehutano hwake asi vashomanana vanofunga kuti Our Juan Mata Biography iyo inofadza chaizvo. Iye zvino kunze kwekuwedzera kwaunoda, rega Tanga.
Juan Mata Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts:Upenyu Hwekutanga
Juan Manuel Mata García akaberekwa musi we 28th musi waApril 1988 muValfranca Montes de Oca, Spain neJuan Manuel Mata Sr. (baba) naMarta Garcia (amai).
Juan akawana zita rake kubva kuna baba vake, Juan Manuel Mata Rodríguez uyo aida kuti mwanakomana wake atarise mararamiro ake uye basa rake semutambo. Baba vaMata vakanga variwo mudiki muchecheti munguva yepanguva yake. Mhuri yake haina kumbobvira yava nemuviri wemutambo. Vakamanikidzira kufamba kwavo uye vakave nekuita kwenguva refu yekunyarara uye kuratidza vatsoropodzi zvakaipa. Ndicho chikonzero nei Juan Manuel Mata Rodríguez aida mwanakomana wake Juan Mata kutevera.
Juan akakurira muguta reOcn de Villafranca, Burgos apo pane imwe nguva haana kumbonzwa akasununguka kuna baba vake nekuda kwekushaya mikana yebhola yevechidiki. Pazera remakore 5, baba vake vakamuendesa kubva kune rimwe guta rainzi Oviedo (North West Spain) kwaakawana mikana yebhola. Mata akanga akakurumidza kugadzirisa uye akatanga kutamba mutambo ikoko. Aiva mwana akazvininipisa uye anoshanda nesimba anoremekedza vabereki vake uye akatevera zvirongwa zvavo. Rudo rwaMate yebhola rwakakura zvakanyanya paOviedo. Vabereki vake vakafadzwa nemwanakomana wavo uye vaizomubvumira kutora bhora rake kunyange kumubhedha wake.
Juan Mata Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts:Kukurira Mukurumbira
As Mata anotaura, "Ndakapedza nguva yese yehuduku hwangu paAsturias, muOviedo ndichinyara uye ndichinzwa zvakanyanya kufadzwa nemutambo uyu waizopedzisira wava chido cheupenyu hwangu."
Kukuruka kweAsturias, nharaunda yekuchamhembe kwakadziva kumadokero kweSpain, inozivikanwa nokuda kwegungwa raro rakasimba, makomo, nzvimbo dzezvitendero uye masvingo ekupfuura. Yaiva nzvimbo yekubereka yevheti yepamusoro uye yepamusoro pezvose, imba yevashandi vebhola muSpain yose.
Juan Mata Kubwinya Kwemakore Mazuva
Real Oviedo ndiyo yekambani yekutanga yaJuan Mata paakadzidza kutamba nebhola. Mata akawana nickname 'Little Bean' pamusana pekuve muduku uye akafa muchechi yake. Akasara-akakurumidza kutungamira boka rake kuti akunde mukwikwi hukuru semwana. Hazvina kutora nguva asati Juan akakura kuva nechokuita chiso chevakuru chichiri kutarisa chatinoziva nhasi.
Jaya Juan Mata
Sezvaanenge achiisa muwebsite yake yeBiography yakanyorwa, JuanMata8; "Real Madrid yakagogodza pamukova wangu pandakanga ndiri nemakore 15 mu2006. Ndakatamba mitambo mina yekambani yechikoro. Ndakaita chibvumirano changu semutambi wechechi naCastilla muChipiri Division, munguva pfupi mushure mekutendeuka 18 ". I 'Little Bean' yakatumidzwa semunhu mukuru mu Real Madrid's youth academy, La Fabrica. Nguva yake yakanakisisa yakauya apo iye asingatendi-akatungamirira boka rake kuSpain Juvenil Cup musoro.
Jaya Juan Mata kuMadrid
Kukunda kwaJuan Mata kwakatungamirira kumakwikwi eSpanish achikomberedza kumativi ose se shark. Zvairevawo kumanikidzira kwaari pamusoro pechikwata chechechi yeTal Madrid. Kunyange zvakadaro, haana kuwana mukana wekutamba kune vatungamiri vemu Real Madrid nekuda kwevakuru vavo veGalatias avo vakanga vasingagoni kuvepo panguva iyoyo. Izvo zvinoda Zinedine Zidane, David Beckham uye mamwe makaroti ebhola haana kuisa nzira yaJuan Mata kuti apinde muboka rakakura.
Sezvo akacherechedza mafungiro ake kuti apinde mumutambo mukuru weCal Madrid, baba vake vakaita chigumo chekupedzisira kuti vamubvise kunze kwechikwata vachimuisa mumaoko evanhu vakawanda vachikwikwidzana nokuda kwechiratidzo chake. Yaiva Valencia CF uyo akazowana mukana wekumubvisa.
Mata akaita zviratidzo zve 174 uye akacherechedza 46 zvinangwa zveValencia. Muzhizha 2011 Arsenal yakagadzira Valencia zvakanaka pamusoro peJuan Mata asi yaiva Chelsea yakakwanisa kuisa muSpanish muAugust 2011. Juan akava mutungamiri wekambani yeLondon uye akavhota mutambi mutsva weboka mu2012 uye 2013. Zvisinei, Mata akabuda kunze nemutungamiri mutsva Jose Mourinho uye akanga achitsvaga chikwata chitsva mumwaka 2013 / 2014. Manchester United inoda ruzivo pakati pemiti midzi uye yakasayina muSpain ye 44 mamiriyoni eJanuary 2014. Vamwe vose sezvavanotaura, ikozvino nhoroondo.
Juan Mata Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts:Upenyu hweMhuri
Mhuri yaJuan Mata ine nhoroondo yayo kubva kuBogos Spain. Akaberekerwa mumhuri yebhola iyo ine nhoroondo yakareba yekuratidza kuti vanhu havana kururama. Vanhu vanotsoropodza ukuru hwavo uye kusakwanisa kuratidza muviri mumuviri wemitambo. Vakakura mukubatsirana, kusanganisira vana vavo kuti vave vakakodzera mubhola.
Baba vaRain Mata
Baba vaMata vakamubatsira mukubudirira kwebasa rake. Akanga ari muduku kudarika uye akafupisa kupfuura mwanakomana wake. Akanga ari muchengeti wepamusoro weBurgos CF mu80 uye 90.
Juan Mata anogara achitenda baba vake vanodikanwa nokuda kwehupenyu hwake hunobudirira uye nguva dzose vanogovana naye nguva dzinofadza naye pamwe nemhuri yake yose.
Juan Manuel Mata Rodríguez iye zvino anoita sendimi yeA Mata, achiva FIFA-yakanyoreswa.
Baba Mata vaJan Mata uye vashandi
AMAI: Amai vaJan Mata, Marta Garcia akazvivanza kubva kune vhidhiyo nekuda kwezvikonzero zvake. Anopupurirwa kuva iye ari mumufananidzo uri pasi apa.
Iye akwegura kudarika baba vake. Mukadzi waJan Mata ave ari mudzimai wenguva yakazara hupenyu hwake hwose. Mumwe uyo asinganyanyi kufambidzana, pane kudaro, kupa imba-kubatsigira kumurume wake nevana.
Hanzvadzi yaidiwa: Juan ane hanzvadzi inodikanwa uye mwana muduku shamwari yakanakisisa anonzi Paula Mata. Paula Mata haana mubvunzo kuti mutsigiri wake mukuru uyo ​​asingamboregi kunyengeterera mukoma wake anodikamwa kuti ave mukuru pane basa rake. Vanga vave shamwari dzakanakisisa kubvira paudiki hwavo hwemazuva.
Hanzvadzi yaJan Mata Mata-Paula Mata
Kunyange mumunhu wavo mukuru, vose vari vaviri vanowana nguva yekugovana nguva pamwe chete uye vasingambokanganwi uye vachirega kuenda neshamwari yavo yehuduku.
Juan Mata naPaula (Hanzvadzi) vane nguva yakawanda pamwe chete
Juan Mata Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts:Ukama Hupenyu
Is Juan Mata Vakaroora Here? ... Mhinduro ndeye. Iye iye zvino haasati akaroorana asi anofara nekusangana kwake nemusikana wake anodiwa Evelina Kamph.
Musikana wake, Evelina ndiye anonyatsoziva huwandu hwemagariro evanhu ane ruzivo rwakakura rwevateereri. Vose Mata uye musikana wake havasati vava nemanzwiro ekuroorana kana panguva yekunyora. Upenyu hwehukama hwaJaan Mata hunofananidzwa neye Marcus Rashford, Alex Oxlade Chamberlain uye David Zappacosta. Zvakanyanya zvakasiyana uye zvakatarisana Karim Benzema uye Raheem Sterling.
Juan Mata Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts:Anodiwa neHollywood Celebrities
Juan Mata akafadzwa nekucherechedza unyoro hwake uye unyoro hunodiwa zvikuru kunyange neWhitewood Celebrities. Pakati pevakawanda, yaiva nyanzvi yeHollywood Julia Roberts iyo inoramba kudzivisa kuva nemufananidzo ne Midfield mastero.
Juan Mata naJulia Roberts
Roberts uyo anozivikanwa zvikuru nokuda kwebasa rake mukugadzirisa ave ave chido chekutya kweSpain star. Haambokundikani kuwana mukana wekumurinda achiita.
Iyo Hollywood A-nhepfenyuro yakashanyira Old Trafford nemurume wake nevana vatatu kuti vatarise Juan Mata kutamba neWest Ham. Vana varo vanewo chirongwa chevana vaWayne Rooney pamucheto mushure memutambo.
Juan Mata Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts:Mutambi uye Scholar
Mata haana kungofanana chete mumunda, iyewo ane nyanzvi yekudzidza. Juan Mata ane zvidimbu zviviri. Imwe Mukudhinda uye imwe muScience Science.
Akatanga kudzidza Kudhidzira paCamilo José Cela University paaitamba kuValencia. Akazoenderera mberi nekudzidza kwake kuburikidza nepurogiramu yepaIndaneti yaiva neA Technical University yeMadrid. Izvi zvakamuwana muDhigiri muScience Science. Mushure mekudzidziswa kwake uye masikati, Juan Mata anoda kuverenga nekuita zvidzidzo zvake zvepashure.
Juan Mata ndiye mudzidzi anokurumidza. Akadzidza Chirungu uye akachidzidza mukati megore achiziva kuti basa rake raizoita kuti aite kutamba kweChirungu. Paakazobatana neCentral, haana kumbova nematambudziko mukukurukura nevakaroorana vake vekuChirungu kusiyana nesangano reSpain team team ivo vakaita. Kunyanya avo vanofarira ve Diego Costa.
Juan Mata Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts:zvinhu
Kana iwe uchitevera Mata pane imwe yehupenyu hwake hwehupfumi, iwe uchaona kuti anonyatsoda vanoda kufamba uye kuona kuona.
MuSpain anoreurura kuti rudo rwake rwekufamba rwakatanga paakanga achiri muduku, paaishandisa chikwama cheSpain munguva yake yekusununguka.
Pasina mubvunzo, Mata ane hanya nekufamba. Akawanawo rudo rutsva mukupikisa. Izvo zvaanoita pose paanoshanyira nzvimbo.
Juan Mata Vana Vechiitiko Nhau Untold Biography Facts:Nyeredzi yeTennis
Mata ndiye anonyanya kufarira tennis uye anofunga tennis guru, Rafael Nadal kuti ave mutambi wechiSpanish mukuru. Zvose izvi zvikwereti zvemitambo uye shamwari dzakawanda zvakare.
Juan Mata naRafa Nadal
Michael Carrick Childhood Indaba Plus Untold Biography Facts